Al-shabaab oo dagaal kula wareegay degaan ku dhow Magaalada Baydhabo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Al-shabaab oo dagaal kula wareegay degaan ku dhow Magaalada Baydhabo
Al-shabaab oo dagaal kula wareegay degaan ku dhow Magaalada Baydhabo
Wararka aan ka heleyno Gobolka Baay gaar ahaan deegaanka Daynuunaay ayaa waxaa ay sheegayaan in arroornimadii hore ee saakay halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay Ciidanka dowladda Federaalka iyo Al-shabaab.
Dagaalkan ayaa waxaa uu bilowday, ka gadaal markii dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar dhowr jiho ah ku qaadeen Saldhig Ciidanka dowladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ay ku leyihiin deegaanka Daynuunaay oo ku dhow Magaalada Baydhabo.
Dadka deegaanka ayaa waxaa ay ku soo warrameen inuu dhacay dagaal xoog leh oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, isla markaana u jiro khasaaro kala duwan oo ka dhashay dagaalkaas, wallow aysan xaqiijin karin inta uu la egyahay.
Al-shabaab oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay Daynuunaay ayaa waxaa ay ku sheegteen in ay kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka, ayna halkaas isaga baxeen Ciidankii dowladda Federaalka iyo kuwa maamulka ee ku sugnaa Saldhiga.
Sidoo kale Shabaabka ayaa intaas waxaa ay kusii dareen in haatan ay ku sugan yihiin Saldhigyadii ay joogeen Ciidamada ee ku yaalla deegaanka, sidoo kalena dadka ay arkayeen gaadiidka ay wateen dagaalamayaasha oo gudaha u soo galayay Daynuunaay.
Ilaa iyo hadda si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo weerarkii ka dhacay deegaanka Daynuunaay ee Gobolka Baay, una dhow Magaalada Baydhabo, isla markaana ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dhinaca Saraakiisha dowladda oo ku aadan weerarka iyo la wareegida deegaanka ee Al-shabaab.
Maqaal horeKulan laga yeeshay kiisaska horyaalla Maxkamaddaha Ciidamada Dowladda
Maqaal XigaGuddiga qaban-qaabada xuska maalmaha xoriyadda oo la kulmay Laamaha amniga